တစ်ဦးကအနိုင်ရ COLLEGE APPLICATION သို့အက်ဆေးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ ?
သင့်ကျောင်းလျှောက်လွှာ Exposition ရေးသားသည့် SAT ယူပြီးမှဒါမှမဟုတ်သင်၏အဖြစ်ယခုသင့်စမ်းသပ်မှုရမှတ်များကိုဆည်းပူးခြင်းနှင့်အရာကျောင်းမှသိကျွမ်းဘူးသောချွတ်အခွင့်အလမ်း ACT.On အောက်ပါချဲ့မနေတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည်(s ကို) သငျသညျသှားဖို့ဆန္ဒရှိ, အခုအချိန်မှာသင့်ကျောင်းဆောင်းပါးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဖွင့် setting ကိုစတင်ရန်တစ်ခုစံပြအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒီအရေးကြီးသောတာဝနျကိုလုပ်ဖို့ကနောက်ဆုံးအခိုက်အထိကိုင်ထားဖို့မကြိုးစားပါ.
တစ်ဦးကအနိုင်ရ COLLEGE APPLICATION သို့အက်ဆေးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ
တစ်ဦးလှပသောတည်ငြိမ်မှုဆောင်းပါးသင့်ရဲ့ SAT / ACT ရမှတ်ထက်အဆင့်လက်ခံရေးအကြံပေးအဖွဲ့များနှင့်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်. ဤအလိုင်းများတလျှောက်, သငျသညျအလွန်ကြောင့်စစ်မှန်သောကျောက်မျက်လုပ်ဖို့အချိန် ယူ. တွန်းဖို့အားပေးနေကြပါတယ်.
အများစုမှာကျောင်းများသင်တို့အပေါ်မှာတှေ့ရသောထံမှရမှတ်တစ် rundown ပေး. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများလျှောက်ထားသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, အနည်းငယ် Exposition ရေးသားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးအတှကျအငျလို့ရတဲ့လုပ်ဆောင်မယ့်ဘာသာရပ်ကောက်.
သငျသညျများမှာတိကျစွာတော်မူသောသင်တို့ peruser ပြောပြများအတွက်အံ့သြစရာသို့မဟုတ်မတူကွဲပြားသောနည်းလမ်းဖွဲ့အစီအမံကြိုးစားနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူသို့မဟုတ်သူမအတိုက်အခံကျော်သင်သည်ကောက််၏. နောက်ကျောသင်၏အသက်တာကိုအုပ်စိုးစဉ်းစားပါနဲ့သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဇာတ်ကောင်တခုအဖြစ်အသုံးပြုစေခြင်းငှါတစ်ဦးအခါသမယရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးပမ်း.
သင်၏နောက်ချဲ့မနေတော့သင့်ရဲ့ဘာသာရပ်အားကောင်းရန်န်းကျင်သုံးအာရုံစူးစိုက်ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ Exposition ၏ကိုယ်တွင်ဤအာရုံစူးစိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်.
အပြင်အဆင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမှနောက်ဆက်တွဲကြောင့်အားကောင်းညွှန်ပြ, သင်သည်သင်၏ဘာသာရပ်ကိုထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာအဆိုပါ peruser ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖမ်းမိတဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းစဉ်စဉ်းစားသင့်တယ်.
ဘတ်:5သူတို့ရဲ့ပထမဦးစွာယောဘကိုရှာဖွေနေကောလိပ်အကြီးတန်းများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ဒါဟာအမှန်တကယ်ခမ်းနားစက္ကူခေါင်းစဉ်စေရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ Exposition ရေးသားခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုတောင်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ. ရိုးရှင်းစွာအကာကြောက်မက်ဘွယ်ခေါင်းစဉ်အားလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသတိရ.
သင့်ရဲ့ Exposition ဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့ဘာသာရပ်တင်ပြ်၏နှင့်သင့်ဆောင်းပါးကိုဖြည့်စွက်ဖို့သူတို့ကို avid စေများအတွက် peruser ရဲ့ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ထဲမှဆယ်နှုတ်နေစဉ်အာရုံစူးစိုက်ထောက်ခံအားပေး.
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တိုင်းတာနှင့်သံသယရှိအသုံးအနှုန်းတွေကဒီဖြည့်ဆည်းဘို့နှစ်ခုကြောက်မက်ဘွယ်နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်. နှစ်ဦးစလုံးနည်းစနစ်သူတို့ရဲ့အရှည်ပွီးပညာရှိရှိသင့်ရဲ့မှတ် fit အလားတူကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်.
စက္ကူ၏အလောင်းတော်ကိုမှန်မှန်ဖြစ်ပါသည်3သို့4အရှည်ကဏ္ဍများနှင့်သင့် supporting အာရုံစူးစိုက်အပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်. ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါ(ies) သင့်အကျင့်စာရိတ္တကိုမီးမောင်းထိုးပြ, အကျိုးစီးပွား, နှင့်သင့်စက္ကူခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ထူးခြားမှု. အကျဉ်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစေခြင်းငှါစိတ်ကိုထားပါ, ဘယ်ကိစ္စမဆို. သင့်ရဲ့ပုံပြင်နေရသည်နှင့်ပြု.
အဆိုပါနိဂုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုဆောင်းပါး၏မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအရေးယူရန်သင့်အားအရာခပ်သိမ်း entwine နှင့်သင့်အကြံပြုချက်ဖော်ပြရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်. အရေးယူမှဖိတ်ကြားချက်ကို, သိသိသာသာ, ငါ့ကိုကောက် "ဟုအော်သင့်၏!"
Academic ရေးသားခြင်း FOR ဆောငျးပါး Topic
« အချက်များဟာဂရိတ်ပုဂ္ဂလိကရေးစပ်သီကုံးရေးသားသူ Be ရန်စဉ်းစား
ကောငျး COLLEGE ဝင်ခွင့်များစာစီစာကုံးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ ? »